पुरुषभन्दा राम्रो काम गर्छन् महिला मिस्त्री सम्मान स्वरुप सेयर गरौ ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / पुरुषभन्दा राम्रो काम गर्छन् महिला मिस्त्री सम्मान स्वरुप सेयर गरौ !
admin June 6, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 335 Views
पोखरा – कामको खोजीमा धेरै नेपाली दिदीबहिनी विदेश गएका छन्। राम्रो काम पाइने प्रलोभनमा परेर विदेश गएका धेरै दिदीबहिनीले रोजगारका क्रममा कठिन जिवन बाँच्न बाध्य भएका समाचार आइरहेका छन्। यस्ता समाचार आइरहेपनि कामको खोजीमा नेपाली युवतीहरु विदेश जाने क्रम भने रोकिएको छैन्। यतिबेला कोरोना कहरले वैदेशिक रोजगारमा रहेका धेरै युवायुवती बेरोजगार भएर देश फर्कने प्रतिक्षामा छन्।
Previous कोरोना जितेपछि यसरी नाच्दै घर फर्किए ५२ बालबालिका
Next यती धेरै खुसी रमेश प्रसाई र नन्दा को छोरोको आगमन बधाई नदिनेलाई यस्तो,